ကံမကုန်ရင်လဲ … ရှင်နဲ့ ပြန်မဆုံချင်တော့ပါဘူး …. – Shinyoon
ကံမကုန်ရင်လဲ … ရှင်နဲ့ ပြန်မဆုံချင်တော့ပါဘူး ….
လွမ်းတယ်လို့ အော်နေပေမယ့် ပြန်လိုချင်နေတာမဟုတ်ဘူး ။ လွမ်းနေရုံပါ အရင်တုန်းကလို အခြေအနေမျိုးကို ဒီတစ်သက် ဘယ်တော့မှ ပြန်မလိုချင်တော့ဘူး ။ ငိုရတဲ့ မျက်ရည်တွေဟာလဲ ခမ်းခဲ့ပါပြီ ။ ပြုံးတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေဟာလဲ မဲ့ခဲ့ပါပြီ ။ ဒီဘ၀တော့ ဒီလောက်နဲ့ လုံလောက်ပြီလို့ပဲ ထင်ပါတယ် ။
၀ဋ္ကြွေး ကုန်လို့ပဲ ဝေးဝေး ရေစက်ကုန်လို့ပဲ ဝေးဝေး ဘာကြောင့်ပဲ ဝေးဝေးပါ … ကံမကုန်ရင်တော့ ဒီတစ်သက် ရှင်နဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံချင်တော့ပါဘူး ။ ပျော်မယ်ထင်လို့ လျှောက်တဲ့လမ်းမှာ တကယ်လဲ ပျော်ပါစေ ။ ငိုခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ၀ဋ်တွေ ရှင့်ဆီ ပြန်မလည်လာပါစေနဲ့ဆိုတာကတော့ တကယ့်ဆုတောင်း ကိုယ့်လို ခံနိုင်ရည် မရှိလောက်ဘူးလေ ။
သံသရာတကွေ့ ဆုံခဲ့ပြီးသွားပြီ … သံသရာအဆုံးထိ မငိုချင်တော့ပါဘူး ။ ပျော်ခဲ့ရတာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်နေမှာဖြစ်သလို နာကျင်စေတာတွေ အတွက်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါတယ် ။ လွမ်းတယ်လို့ ကျွန်မ အော်နေပေမယ့်လဲ ရှင့်ကို လှမ်းခေါ်နေတာ မဟုတ်ဘူးနော် ။ စိတ်ချလက်ချသာ သွားပါ ကျွန်မလဲ ခုမှ လွတ်လပ်စလေး ဖြစ်လာတာ ။
လူနှစ်ယောက် … ခွဲခွါခြင်းတွေမှာ တချို့တွေကတော့ ကံမကုန်ရင် ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ဆိုတဲ့ စကားလေးသုံးကြတယ် ။ ကျွန်မကတော့ ကံမကုန်သေးရင်တောင် ရှင်နဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံချင်တော့ဘူး ။
ကံမကုန္ရင္လဲ … ရွင္နဲ႔ ျပန္မဆုံခ်င္ေတာ့ပါဘူး ….
လြမ္းတယ္လို႔ ေအာ္ေနေပမယ့္ ျပန္လိုခ်င္ေနတာမဟုတ္ဘူး ။ လြမ္းေန႐ုံပါ အရင္တုန္းကလို အေျခအေနမ်ိဳးကို ဒီတစ္သက္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး ။ ငိုရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြဟာလဲ ခမ္းခဲ့ပါၿပီ ။ ၿပဳံးတတ္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြဟာလဲ မဲ့ခဲ့ပါၿပီ ။ ဒီဘ၀ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ လုံေလာက္ၿပီလို႔ပဲ ထင္ပါတယ္ ။
၀ေျဋၠြး ကုန္လို႔ပဲ ေဝးေဝး ေရစက္ကုန္လို႔ပဲ ေဝးေဝး ဘာေၾကာင့္ပဲ ေဝးေဝးပါ … ကံမကုန္ရင္ေတာ့ ဒီတစ္သက္ ရွင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မဆုံခ်င္ေတာ့ပါဘူး ။ ေပ်ာ္မယ္ထင္လို႔ ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းမွာ တကယ္လဲ ေပ်ာ္ပါေစ ။ ငိုခဲ့ရတဲ့ ကြၽန္မ ရဲ႕ ၀ဋ္ေတြ ရွင့္ဆီ ျပန္မလည္လာပါေစနဲ႔ဆိုတာကေတာ့ တကယ့္ဆုေတာင္း ကိုယ့္လို ခံႏိုင္ရည္ မရွိေလာက္ဘူးေလ ။
သံသရာတေကြ႕ ဆုံခဲ့ၿပီးသြားၿပီ … သံသရာအဆုံးထိ မငိုခ်င္ေတာ့ပါဘူး ။ ေပ်ာ္ခဲ့ရတာေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေနမွာျဖစ္သလို နာက်င္ေစတာေတြ အတြက္လဲ ခြင့္လႊတ္ပါတယ္ ။ လြမ္းတယ္လို႔ ကြၽန္မ ေအာ္ေနေပမယ့္လဲ ရွင့္ကို လွမ္းေခၚေနတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ။ စိတ္ခ်လက္ခ်သာ သြားပါ ကြၽန္မလဲ ခုမွ လြတ္လပ္စေလး ျဖစ္လာတာ ။
လူႏွစ္ေယာက္ … ခြဲခြါျခင္းေတြမွာ တခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ကံမကုန္ရင္ ျပန္ဆုံၾကတာေပါ့ဆိုတဲ့ စကားေလးသုံးၾကတယ္ ။ ကြၽန္မကေတာ့ ကံမကုန္ေသးရင္ေတာင္ ရွင္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မဆုံခ်င္ေတာ့ဘူး ။
ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့လက်က ကိုယ့်အတွက် သီးသန့်ဖြစ်တည်လာခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ